Maraykanka oo cabsi ka muujiyey tillaabo istaraatiji ah oo uu qaadi rabo dalka Shiinuhu | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maraykanka oo cabsi ka muujiyey tillaabo istaraatiji ah oo uu qaadi rabo...
Maraykanka oo cabsi ka muujiyey tillaabo istaraatiji ah oo uu qaadi rabo dalka Shiinuhu
(Beijing) 02 Sebt 2020 – Shiinaha ayaa la sheegay in ay ugu yaraan labalaabayaan tirada madaxyada nukliyeer ee ay haystaan 10-ka sanadood ee soo aaddan.
Shiinaha oo hadda la qiyaasayo inuu ku hubaysan yahay ugu yaraan 200 oo madax, ayaa sidoo kale usii dhowaanaya inuu awood u yeesho inuu nukliyeerka ka ridi karo dhul, bad iyo cir, waxa loo yaqaan Triad, sida uu sheegayo Bentagon.
Waa markii ugu horreeysey ee warbixin sanadeedka ciidamada Shiinaha ee loo gudbiyo Koongarayska lagu soo qaado tirada madaxyada nukliyeerka Shiinaha.
Jamciyadda Saynisyahannada Maraykanka ayaa iyagu qiyaasaya inuu Maraykanku haysto qiyaastii 320 madax..
Pentagon oo ka walaacsan kororka cududda istaraatijiga ah ee Shiinaha ayaa sheegay in Shiinuhu uu haatan isaga oo aan is dhibin labalaabi karo tirada madaxyada nukliyeer maadaama uu haysto walxihii laga samayn lahaa, dhaqaalihii iyo awooddii farsamo.
“Waanu ka walaacsan nahay sida cad tirada …. balse waxaa kasii daran tiirada horumarinta madaxyada la sameeynayo ee badan,” ayay yiraahdeen.
Previous articleImaaraadka oo Israel kula heshiiyey in wax laga bedelo maqaamka Masjidka Al Aqsaa & Yuhuudda oo ay u fasaxeen inay ku dhex ”cibaadaystaan” (Muslimiinta oo meel yar lagu koobay & Quddus oo…)
Next article”Aan Somalia kaalmo waydiisanno waa deris fiicane” – Madaxii La-dagaallanka Daroogada Kenya